I-China Runjin © Krunt ™ -G4 Umshini Wokugcwalisa Ukhilimu Okhilimu Nokwakha | Runchen
Ukugcwaliswa kwe-ayisikhilimu, i-sorbet nemikhiqizo ye-ice yamanzi kwizigaxa, izinkomishi neziqukathi eziningi zomklamo, ukwakheka nosayizi ohlukahlukene.
Izinkomishi, izigaxa noma iziqukathi eziningi kukhishwa ngakunye kusuka kusitaki sokuhambisa bese kufakwa ku-lamellas, kulungele ukugcwaliswa.
Ukugcwaliswa kwe-ayisikhilimu, i-sorbet noma iqhwa lamanzi kwenzeka nganoma yisiphi isikhathi sokugcwalisa isikhathi, i-volumetric filler noma i-extrusion filler. Endabeni ka-ayisikhilimu okhishiwe, kufakwa nendlela yokusika.
Ukuhlobisa ngezithako ezahlukahlukene ze-viscous noma eziqinile kungenzeka futhi kukhona uhla oluphelele lwezinto zokuhlobisa ongazikhethela ezitholakalayo ze-Runchen Krunt-G4.
Umsebenzi we-lidding ungakhethwa ezinqubeni eziningi ezitholakalayo, kuya ngomklamo womkhiqizo, futhi ukufaka uphawu kokushisa usebenzisa ucwecwe olusikiwe kungenzeka.
Ngemuva kokufaka uphawu nokubhinca imikhiqizo iyaphakanyiswa isuswe kuma-lamellas bese idluliselwa ebhande lokuhambisa elidlulisayo. Izinhlelo zokuphatha ezizenzakalelayo, isb. Indawo yokudlulisa nokukhetha indawo, ziyatholakala.
IRunchen Krunt-G4 yakhelwe kuhlaka oluqinile lwensimbi engagqwali. Umshini wokugcwalisa wenzelwe ukuhlangabezana nezinga eliphezulu kakhulu lempilo, kufaka phakathi ifreyimu evuleke ngokuphelele evikela izingibe zamanzi futhi evumela ukuhlanzwa kahle kwephayiphu. Amathebhu wokufafaza wokuhlanza i-lamella nawo afakiwe njengemishini ejwayelekile.
Ukuthanjiswa kwamahhala, insimbi engagqwali yokuhambisa amaketanga ane-pitch ka-70mm kuthwala ama-lamellas afakwe emaketangeni esebenzisa izikrini "zokukhiya okusheshayo" ukuze kube lula ukushintsha.
Zonke iziteshi zokusebenza eziphezulu zifakwe kojantshi, ngaphandle kokulungisa izimbobo ezivumela ukubekwa okulula nokusheshayo kwesiteshi ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi.
Yonke imishini yokugcwalisa, yokuhlobisa neyokusiza kufaka phakathi imibhobho, amapayipi, isiteshi sedrayivu njll yenzelwe ukunqanyulwa okulula nokusheshayo kokushintshwa komkhiqizo okulula nokuhlanzwa okusebenzayo. Umshini uyatholakala ngezindawo ezimbili zokukhomba ezihlukile. Umshini onephimbo lokukhomba le-140mm elenzelwe imikhiqizo emincane kanti umshini onentambo yokufaka inkomba engu-210mm uyakwazi ukuphatha usayizi omkhulu womndeni neziqukathi eziningi. Akudingeki ukuthi ushintshe amaketanga lapho ushintsha iphimbo elihlukile lama-lamellas.
Imoto yegiya elawulwa ngemvamisa ishayela ikham enkulu isebenze isitsha sokuhambisa inkomishi noma isitsha ne-ejector. Ukunyakaza okuhamba phambili kwama-lamella conveyors kuqondiswe ngomshini kusuka kudrayivu eyinhloko ngomshini wokukhomba.
Isifaki khodi sihlinzeka ngesiginali ku-PLC ukuze ilawule ngokunembile ukunyakaza okwenziwe ngomoya.
I-Runchen Krunt-G4 ilawulwa ngohlelo olulawulayo lwe-PLC. I-PLC yenza kube nokwenzeka ukuthola ukulawula okunembe kakhudlwana nokushintsha okulula phakathi kwemikhiqizo. I-PLC ivumela ukuqala nokuvala okuzenzakalelayo, futhi ifakwe isikhala sokugcina idatha esingu-2MB esivumela inani lemikhiqizo elungiselelwe ngaphambilini.
Imininingwane yomkhiqizo iyaboniswa kuphaneli yokulawula ukuthinta ukuze isebenze kalula futhi ihlolwe.
Uhlelo olucindezelwe lomoya nomoya
Ngenxa yezizathu zenhlanzeko zonke izingxenye zomoya zenziwa izinto ezilwa nokubola, izinto zokuthambisa. Onke ama-valve anamagiya esihlalo asebenze ngogesi futhi akhelwe kwikhabethe lensimbi engagqwali ngenhla komshini.
Umshini odingekayo wokuhambisa inkomishi, isitsha nesivalo utholakala ngamaphayiphu e-venturi.
Izinzuzo Ezengeziwe Zomshini
Uhlaka olude futhi oluqinile
Ubude bomshini bunwetshelwa ku-5m ukuze kunikezwe isikhala esengeziwe sokusebenza ngesandla kanye nezikhundla eziningi zeziteshi ezengeziwe ezisebenzayo. Ukuxhaswa kohlaka lomshini kukhuphukile kusuka ezingcezwini ezi-4 kuye ezi-6 eziqinisa amandla omshini wokugijima ngokuqina.
IServo Motor Drayivu Yesiteshi Sokugcwalisa
I-Siemens S7-300 PLC ifakwe emshinini ojwayelekile, i-servo motor drive yesiteshi sokugcwalisa ingangezwa ngaphandle kokuguqulwa okwengeziwe. Ukuhamba kokugcwaliswa kuhlelwa ngephaneli yokusebenza ukulingisa izinhlobo ezahlukahlukene zekhamera yejika, idatha yejika ingagcinwa futhi ibuyiselwe. Lokhu kwenza ushintsho lomkhiqizo nokuqamba kube lula kakhulu.
Ukushisa Kwesistimu Yeshokholethi
Isistimu yokushisa kanye nesistimu yokulawula izinga lokushisa kukho kokubili ukushaya ushokoledi kanye nohlelo lokuphotha kungumklamo ojwayelekile wokugwema ushokoledi onamathele emazingeni okushisa aphansi.
Isiteshi Sokulinganisa Lid
Iyunithi yokulinganisela yesembozo enamathiselwe inamathiselwe ukuthuthukisa ukuzinza kokunemba kokugoqa ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Umshini wokugcwalisa oyisisekelo we-Runchen Krunt-G4 unganikezwa ngamasethi ehlukene emishini yokugcwalisa inkomishi, isigaxa noma isitsha. Amasethi ajwayelekile ohlobo ngalunye lomkhiqizo abhalwe ngezansi:
Umshini wokuhambisa indebe
Ukugcwalisa Isitsha Esibanzi
Isixazululo se-Bulk / Container
2 flavour ice cream doser nge-servo drive
2ukudlula ama-valve Sauce topping
2 amasethi esiteshini futha
Umthamo wezithako ezomile
Isigaxa sephepha siyancenga
Ama-valve wokudlula amabiliIsihlukanisi sesivalo
Izinsiza kusebenza Ongazikhethela
Ngaphezu kwemishini ejwayelekile, izinhlobo eziningi zezinto zokuzikhethela ziyatholakala ekunikezeni, ukugcwalisa nokuhlobisa. Lokhu kwenza imikhiqizo enhlobonhlobo ikhiqizwe.
I-Doser ye-2 flavour ice cream yokugcwaliswa okugxile
I-Doser ye-2 ukunambitheka kwe-ayisikhilimu yokugcwaliswa kwe-windmill
I-Doser ye-ayisikhilimu yokugcwaliswa kwe-twister
I-Doser ye-ayisikhilimu evuthayo yokugcwaliswa kwe-twister
I-Doser ye-ayisikhilimu ngokufakwa
Ukuhlobisa iyunithi yokugcwalisa ipensela
Umshini wokuhlafuna ushungamu
Ukufakwa amakhodi kwedethi
O-belt elihambayo Pick & indawo yedivayisi
I-extrusion filler kufaka phakathi idivayisi yokusika yokusika okubandayo Okukhethwa kukho kokushisa okusika ucingo
Izungezisa idivayisi yezwakala ye-extruder
Iyunithi yokuhlobisa Ipensela yokugcwalisa Volumetric filler Liquid doser
I-cocoa powder doser Isihlafuna se-gum dispenser I-Heat seal - ucwecwe lwangaphambi kokusika iDome lid dispenser Cup lid dispenser
Isivalo esingavuleki samabhodlela angaqhekeki Idivayisi ejikelezayo yesivalo
I-Lid spinner Usuku lokufaka ikhodi ku-Outlet conveyor
Khetha uphinde ubeke idivayisi
I-Doser ye-2 flavour ice cream yokugcwaliswa okufanayo
I-heat seal - pre-cut foil Dome lid dispenser Cup lid dispenser
I-Lid spinner Usuku lokufaka amakhodi
Ukuqinisekisa ukusebenza komshini, kunconywa ukuthi usebenzise izingxenye zangempela ezinga-odwa kalula ngokuya ngencwadi yezingxenye zokungcebeleka. Ukusiza ikhasimende ukwengeza isitokwe sezingxenye zokungcebeleka, umshini wokugcwalisa we-Runchen Krunt-G4 wenzelwe ukusebenzisa izingxenye eziningi ezihambisanayo emakethe, kufaka phakathi i-140mm pitch lamellas, iziteshi zomsebenzi, izingxenye zesakhiwo, izingxenye zokushayela ngokwesibonelo i-sprocket kanye ne-chain, element yokushisa njll.Kepha kuphakanyiswa ngokuqinile ukuthi uqinisekise nge-Runchen ngaphambi kokusebenzisa izingxenye ezihambisanayo ukugwema noma yimuphi umonakalo kufayela le- umshini.
Cha imizilaInkomba ye-indexing Okukhipha okujwayelekile (ama-pcs / h) Cha yeziteshi Ijubane lomshini (unhlangothi / iminithi) UMax. Isigaxa usayizi womkhiqizo Isigaxa lamella No.
Umkhiqizo wonxande: mm
inki Unxande inkomishi lamella
UMax. yenza. ukuphakama: Indebe
Imizila emi-4140 / 5.5 ”1030030
I-3.1 × 4.5 [B1]
Imizila emi-3140 / 5.5 ”760030
I-4.3 × 4.5 [B2]
Imizila emi-2140 / 5.5 ”520030
Imizila emi-3280/11 ”480020
I-4.0 × 9.8 [B4]
Imizila emi-2280/11 ”340020
Umzila owodwa280/11 ”210020
Imishini yoshokholethi Ivolumu yesitsha Ukulinganisa ivolumu ngeyunithi ngayinyeUkuhlobisa Ukumboza I-14Litre （3.7 US Gals） × 2 2-6ml (0.07-0.20 fl. Oz.)I-4-8ml (0.14-0.28 fl. Oz.)
Capacity Umthamo wangempela uzoncika ezintweni eziningi, ezibandakanya ukwakheka nomthamo womkhiqizo kanjalo nezindlela zokugcwalisa nokuvala uphawu.
Ukusetshenziswa kwengcindezi yokusebenza
Imoto enkulu eyiServo motor Filler ejikelezayo
Ukushisa ibhande lokuhambisa ibhande
ejwayelekile ejwayelekile ejwayelekile ejwayelekile ejwayelekile
Akukho okuqukethwe kukawoyela, okuqukethwe ngamanzi ≤ 2.0g / cu.m 6bar (87 psi)2.5 cu.m / min 3 × 380V / 50Hz
Ukucushwa Okujwayelekile kwe-Lamellas
[A1] 140 iphimbo 4 yomzila oyindilinga womkhiqizo [B1] 140 iphimbo 4 yomugqa unxande umkhiqizo
[A2] 140 iphimbo imizila emi-3 yomkhiqizo oyindilinga [B2] 140 iphimbo 3 imizila unxande umkhiqizo
[A3] 140 iphimbo 2 imizila yomjikelezo womkhiqizo [B3] 140 iphimbo 2 imizila unxande umkhiqizo
[A4] 280 iphimbo imizila emi-3 yomkhiqizo oyindilinga [B4] 280 iphimbo 3lanes umkhiqizo unxande
[A5] 280 iphimbo imizila emi-2 yomkhiqizo oyindilinga [B5] 280 iphimbo 2 imizila unxande umkhiqizo
[A6] 280 iphimbo 1 yomzila oyindilinga womkhiqizo [B6] 280 iphimbo 1 yomugqa wonxande umkhiqizo
※ [A1] lamellas ukucushwa okuzenzakalelayo komshini ojwayelekile, iziteshi zomsebenzi ezifakiwe nazo ziyahambisana ne- [A1] lamellas.
Lam 140mm noma 280mm lamellas ayatholakala ngokuya ngesicelo sekhasimende.
Ama-lamellas we-pitch angama-210mm namaketanga ayatholakala ngokuya ngesicelo sekhasimende
Isigaxa ne-Cup dispenserUkusebenza okuzinzile, akukho monakalo empahleni yokugoqa.
I-Presser ne-Chocolate SprayI-atomization engafaniyo, ukulawula ivolumu kahle. Ukushisa kulayini wokubuyela kanye nemibhobho yesifutho yokugwema ushokoledi.
IServo Drayivu Yokugcwalisa UhleloUkudlidliza okuphansi nomsindo, i-lubrication mahhala. Mane nje ushintshe idatha yejika ngephaneli yokulawula yemikhiqizo emisha emisha ngaphandle kwezindleko ezingeziwe.
Langaphambilini Umshini wokugcwalisa umshini weRunjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary
Olandelayo: Umshini wokuqandisa weRunjin © Krunt ™ -N50